Waxaa jira tobanaan kun oo dadka isticmaala sannad kasta u xanuunsataan arrinta khasaaro file iyo sababo la mid ah waxaa jira tobanaan kun oo barnaamijyo lagu horumariyo si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada farshaxanka ee la xiriirta soo gudbin khasaaraha iyo tallaabooyinka ka hortagga in ay yihiin in la qaado arrintan la xiriira. Waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in barnaamijka ugu wanaagsan ee la doorto ee arrintan la xiriira iyo tutorial tan loo qoray si loo hubiyo in tani ma arin aan noqdo user kuwaas oo uu horey u gaaray dhibaatada soo gaartay file.
Qalabka si ay u qabtaan soo kabashada xogta
Sida ayaa lagu sharxay ka hor iyo weliba in ay jiraan tobanaan kun oo qalab iyo khayraadka la heli karo online si loo hubiyo in arrinta uu la xalin qofka macaamilka iyo inta badan qalabka shaqeeyaan hab ugu fiican. Waxaa sidoo kale ku taliyey in la hubiyo in user helo natiijada ugu fiican ee marka qalab la mid macquul ah u doortay in aan loo daboolo baahiyaha iyo baahida user kaliya laakiin sidoo kale in la hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan. Si aad fikrad saxda ah ee hoos ku jira qaar ka mid ah adeegyada oo loo isticmaali karo in arrintan la xiriira:
Adeegyada kabashada xogta Professional in kharash dhowr kun oo doolar in ay sax ah.
Dhisay in qalabka heer gudahood OS ah.
Barnaamijyada software-kabashada Data kaasoo u ogolaanaya user si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican. Kor ku xusan waa kuwa ugu badan oo gobolka ka mid ah siyaabaha tahay in la hubiyo in arrinta dib u soo kabashada xogta waxaa sidoo kale waligeed ka horimaanin ama haddii ay jirto markaas fursad waxaa la xalin sida ugu dhaqsaha badan. Laga tago mid ka mid ah hore oo kale fursado badan yihiin macquul u user ay u hirgeliyaan iyo in la hubiyo in ugu fiican in la siiyo nidaamka arrintan la xiriira.
Xal Best: kabsado files ka kaadhka xusuusta in 3 tallaabo
Sida cinwaanka gaysteen oo u cad yahay xalka ugu wanaagsan haddii user helo arrinta khasaaro xogta gal qalabka nooc kasta ama kaarka SD ah in ay sax ah kaas oo sidoo kale loo yaqaan kaadhka xusuusta. Marka tan la eego Wondershare ayaa mar kale sameeyo yaab iyo waxa uu ku soo bandhigay ugu fiican oo gobolka ka mid ah qalab tahay in sidoo kale loo yaqaan ee ah Wondershare Data Recovery oo loo isticmaali karaa si loo hubiyo in dib u soo kabashada xogta marna waa arin oo dhan. Ee falanqaynta si qoto dheer oo ka mid ah qalab iyo natiijooyinka la xiriira yihiin wax u kexeeyey oo dadka isticmaala ku waalan iyo resultantly saarka ayaa kaalinta sare. Wondershare Data Recovery Hubiyaa in gobolka oo ka mid ah farshaxanka iyo natiijada laga cabsado waxaa lagu soo bandhigaa oo la qasabno oo kaliya dhowr user helo dib xogta in la khasaaray ah. Waxaa sidoo kale loo arkaa in ay tahay mid ka mid ah barnaamijyada ugu kalsoon tahay marka ay timaado dhexdhexaad ah ee soo kabashada xogta.
Ka dib markii jira noocyo file taasoo ay taageereyso barnaamijka software Wondershare Data Recovery ah oo uu helo natiijada ugu wanaagsan ee user halka kabsaday mid ka mid ah ee hoos ku:
Xaaladaha ay taageerayaan barnaamijka
Ka dib markii qaar ka mid ah xaaladda waa khasaare xogta ay sabab u tahay taas oo aan la soo kabsaday oo keliya, laakiin waxaa barnaamijka sidoo kale wuxuu hubiyaa in user helo natiijada ugu fiican marka ay timaado meelaynta xogta gudahood folder wax soo saarka sida ugu barnaamijyada xogta aan kala sooc lahayn oo kala markaas waa arrin kale laakiin ka duwan barnaamij kasta sida Wondershare Data Recovery ayaa loogu talagalay si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay in arrintan la xiriira oo aan wax arrintan iyo dhibaatada.
Tirtirka ah Shil
Sida loo isticmaalo Wondershare Data Recovery inuu ka soo kabsado files ka kaadhka xusuusta
Tallaabooyinka in ay ku lug leeyihiin in arrintan la xiriira waa kuwo sahlan oo toos ah iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user a waa in ay raacaan talaabooyinka hoos ku xusan si aad u hubiso in macluumaadka aan la soo kabsaday oo kaliya laakiin natiijada ugu wanaagsan ayaa sidoo kale laga helay leh ixtiraam in isticmaalka software iyo sidoo:
1. URL ayaa http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html waa in la isticmaalaa si loo hubiyo in barnaamijka la soo bixi rakiban oo ay maamulaan in la bilaabo hanaanka soo kabashada xogta:
2. Marka badhanka soo socda u riixriixan oo user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in nooca file waxaa markaas la doortay si ay u hubiyaan in ugu fiican oo gobolka ka shaqeynayaan tahay barnaamijka la riyaaqay:
3. Meesha kulan ku saabsanaa arrimaha dhacay ayaa waxaa sidoo kale in la cayimay si loo hubiyo in search dhibic pin la sameeyay si loo badbaadiyo waqtiga user iyo sidoo kale khayraadka nidaamka:
4. Marka file ah ayaa la helay user markaas u baahan yahay in la hubiyo in waxyaalahan waxaa loo arki waxaana la soo kabsaday sida rabitaan iyo baahida loo qabo:
Ka fogaanshada talooyin khasaaro file
Ka dib markii qaar ka mid ah talooyin in ay tahay in la hirgeliyo si loo hubiyo in khasaare xogta waxaa loogu hortegi karaa habka ugu fiican:
1. Qalabka waa in aan marnaba la demiyo ilaa xogta si buuxda ma ku qoran kaadhka xusuusta kamarada ah.
2. kaadhka xusuusta waa in aan la dhaqaajin haddii image ayaa weli lagu farsameeyo sida uu keeno musuqmaasuqa kaadhka xusuusta inta badan kiisaska.
3. Marka faylasha lagu soo guuriyeen in computer kaarka marna laga saaro akhristaha haddii habka koobiyeynta ka socda.
> Resource > Memory Card > Sidee inuu ka soo kabsado files tirtiray ka kaadhka xusuusta in 3 tallaabo